China Iiglavu zesilivere ezineSpandex (antibacterial / kill virus) abavelisi kunye nabathengisi | 3L isicatshulwa
Iiglavu zesilivere ezineSpandex (antibacterial / kill virus)
RFID Conducting enemingxuma
Isilivere camera polyamide conductive / ukukhusela ilaphu
Isilivere camera spandex conductive / uvikele ilaphu
Ipholiyesta yeTaffeta yepeyinti Ilaphu leCopper eliQhelayo
Yobhedu kunye nickel Conductive Ilaphu
Isilivere yeMask (antibacterial / kill virus)
Imisonto ye-FeCrAl enganyangekiyo Thermal
Isilayidi esinyibilikayo esinyibilikayo
Isantya esiphezulu seFECrAl ukumelana nefayibha yokusika
Ilaphu le-fiber ye-FeCrAl enganyangekiyo
ifayibha yentsimbi engenasici
intambo yentsimbi engenacici
ityhubhu yentsimbi engenasici / umkhono / intambo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo ityhubhu / imikhono
ifayibha yesinyithi engenanto
iteyiphu / ibhanti yentsimbi engenasici
Ilaphu lefayibha yentsimbi
Izinto: Isilivere ecocekileyo i-Nylon Spandex
Inqanaba lomsebenzi weAntiviral: 99.9%
Ukuhlala umphezulu: 0.2 Ohm / cm
Ukusebenza kokukhusela: 50.0dB-71.0dB
Iziqhano zesilivere ezenziwe ngePolyamide ngeSpandex
Igama lebrand: 3LTEX
Igama leMveliso: Iiglavu zesilivere ezineSpandex (antibacterial / kill virus)
Icandelo #: KS100S-G
Isixhobo: Isilivere esulungekileyo i-Nylon Spandex
Ukusebenza ngokuKhusela: 50.0dB-71.0dB
Inkcazo emfutshane: Ngaphantsi kwemvelaphi yeCovid 19, kunyanzelekile ukuba abantu bazikhusele ngokunxiba i-antibacterial imaski yobuso kunye neiglavu.
-Isilivere yeyona conductor ilungileyo ineyona ndlela yokuqhuba ibhetele kunayo nayiphi na enye isinyithi
-Antibacterial: inokuthintela i-99.99% yegolide staphylococcus, klebsiella pneumoniae, HIN1
-Iphinde isetyenziswe kwaye ihlambeke: inokuhlanjwa ngaphezulu kwamaxesha e-100
- Ithambile kwaye intofontofo
-Ifashoni kunye nokuqaqamba
Iintlobo ze-Antibacterial: iintsholongwane ezosuleleke ngokuphefumla- i-Covid-19, H1N1, Flu, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform njl.
Imigaqo: Ilaphu lesilivere likhupha ii-ions zesilivere eziza kuthatha iproteni ye-enzyme kumphezulu wentsholongwane kunye nezinye iintsholongwane, ngaloo ndlela kutshabalalisa ubume beebhaktiriya, ezichaphazela ukusinda kwayo, kunye nokufezekisa injongo ye-antibacterial. % Iintsholongwane ezosuleleke ngumatshini wokuphefumla, i-Covid-19, H1N1, umkhuhlane kwimizuzu.
Iziphumo zovavanyo ezivela kwi-Institute of Microbiology and Epidemiology of the Academy of Military Medical Sciences zibonisa ukuba ilaphu le-antiviral linokubulala okanye licinezele umkhuhlane A kunye neentsholongwane zomkhuhlane ngexesha elifutshane.
I-SGS Iziphumo zokuvavanya intsholongwane:
Uluhlu lokuhamba rhoqo kunye nokusebenza ngokukhuselwa:
Uluhlu lwamaxesha: 9KHz-40GHz
I-anti-electromagnetic wave / EMF yokukhusela umgaqo:
Isilivere iqhuba kakuhle kwaye inomsebenzi wokhuselo lwe-electromagnetic. Xa abantu benxibe iimpahla ezichaphazela umbane / iimpahla zangaphantsi / izixhobo zonxibelelwano ukuze banxibelelane nesixhobo se-elektroniki, isinxibo se-anti-electromagnetic wave ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo siqhube amaza ombane, ngaloo ndlela sikhusela umzimba kumaza ombane.
Iiglavu ezisebenza ngokukhawuleza ezikhawulezayo zisebenzisa itekhnoloji ye-BCNT nano-antiviral, enokubulala ngokufanelekileyo okanye ithintele umsebenzi wentsholongwane kunye neentsholongwane.
Njenge-UK, i-Chile njl.njl.
Isiphumo sesilver: Kwimizuzu emi-5 ukubonakaliswa, ityhefu ye-sarS coronavirus kwiiseli zeVERO yehliswa yaya kwinqanaba eliphantsi kakhulu, kwaye kwimizuzu engama-20, akukho miphumo ityhefu ifunyenweyo.
Njengezona zinto zilungileyo zokuqhuba, isilivere yenze eyona ndlela ihamba phambili kunayo nayiphi na enye isinyithi.
Ukugqiba ngokugqibeleleyo i-EMI / i-RFI Shielding, i-Anti-Static, i-Electrical Conductive, Iiglavu Anti-Microbial
Egqithileyo Isilivere yeMask (antibacterial / kill virus)
Okulandelayo: Iziqhano zeSilver (antibacterial / kill virus)